ယခုသည် ရိတ်သိမ်းခြင်းကာလ ဖြစ်သည်။ | Real Conversion
ယခုသည် ရိတ်သိမ်းခြင်းကာလ ဖြစ်သည်။
HARVEST TIME IS NOW !
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၇ ရက်၊ လောစ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုခြင်းအစည်းအဝေး၌ ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ်ဟိုင်မာဂျေအာရ် ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
Lord’s Day Evening, August 7, 2011
“ယခုမှစ၍ လေးလလွန်လျှင်၊ စပါးရိတ်ရာကာလဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သင်တို့သည် ဆိုတတ်သည် မဟုတ်လော့။ ငါဆိုသည်ကား၊ စပါးရိတ်ခြင်းအလို့ငှါ လယ်ပြင် တို့သည် ယခုပင်ဝင်းဝင်း ရှိသည်ကို မျှော်၍ကြည့်ကြလော့။ (ရှင်ယောဟန် ၄း၃၅)”
တပည့်တော်တို့သည် ရောက်ရှိလာတော့မည့် ရိတ်သိမ်းခြင်းကာလကိုအတူတကွ ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမည်။ “လေးလလွန်လျှင် စပါးရိတ်ရာ ကာလဖြစ် လိမ့်မည်။”ဟူသော တူညီသောဆိုရိုးစကားရှိခဲ့ပေလိမ့်မည်။ သခင်ယေရှု ဝိညာဉ် ရေးရာအတွက် သွန်သင်ဆုံးမသည့်အချိန်၌ ထိုခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာ စပါးရိတ်ခြင်း ကာလအား ဝိညာဉ်ရေးရာ သင်ခန်းစာအဖို့ အမြဲသုံးနှုန်း သင်ကြား လျက်ရှိသည်။ နောက်လိုက်တပည့်တော်များက ရိတ်သိမ်းခြင်း ကာလသည် အဝေးကြီးပင် လိုပါ သေးသည်ဟု မတွေးထင်ခဲ့ကြပါ။ ထိုသူတို့က ဘုရားရှင်၏ လုပ်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းတာဝန်သည် နောက်ကြမှပဲ ပြီးစီးမည်ဟုလည်း မတွေး ထင်ခဲ့ကြပါ။ များမကြာသေးခင်က ယေရှုသည် ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မိန့်ကြားခဲ့သဖြင့် တပည့်တော်တို့အားလုံးက ရိတ်သိမ်းရန် စပါးများ ဝင်းပါမှည့်နေပြီ ဖြစ်၍ ရိတ်သိမ်း ခြင်းကာလ ယခုအချိန်ဖြစ်ပြီဟု သဘောပေါက်ခဲ့ကြပါသည်။ ယေရှုဘုရားက ရှာမာရိအမျိုးသမီး အမျိုးသားတို့၏ ဝိညာဉ်အပါအဝင် ရိတ်သိမ်းခြင်းကာလ၌ သူရှိနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ကြီးမားသော အမှုတော်မြတ် ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ကို တပည့်တော်တို့အပေါ်၌ ချပေးထားသဖြင့် တပည့် တော်တို့သည်လည်း ချက်ချင်း လက်ငင်း ကြိုးကြိုးစားစား ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
ထို့ကြောင့် ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့အား “လယ်ပြင်သည် ဝင်းဝင်းမှည့်၍ ရှိနေသည်ကို မျှော်၍ကြည့်ဖို့” သခင်ဘုရား မိန့်တော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ ဘေးပတ် ဝန်းကျင်ရှိ ပျောက်ဆုံးလူသားများသည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ဝန်တာတစ်ရပ် ဖြစ် ကောင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် ရှေ့တိုးသခင့် အမှုတော်မြတ်လုပ်ဆောင်၍ ကောင်းလှိုင်း များယူဆောင်လာရန် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရပါမည်။ (ရှင်ယောဟန် ၄း ၃၅)
ရှင်ယောဟန် ၄း၃၅ နှင့် ရှင်မသဲ ၉း၃၇-၃၈ ကို အထဲက အရေးကြီးသောအချက် (၃)ချက်ကို ကောက်နှုတ်တင်ပြပေးပါမည်။
၁။ ပထမç ကောက်လှိုင်းများရိတ်သိမ်းရန် အချိန်သည် ယခုပင်ဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်၏အဘိုးနှစ်ယောက်သည် တောင်သူလယ်သမား ဦးကြီးများ ဖြစ်ကြပါသည်။ သူတို့သည် နွေဦးရာသီ၌ မျိုးစေ့ချစိုက်ကြပြီး အသီးအနှံရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ သို့မဟုတ်ပါက အမှည့်လွန်ပြီး ကြွေကျ ကုန်မည်ဖြစ်သည်။ ဝင်းမှည့်သောအသီးအနှံရိတ်သိမ်းချိန်ကို “ရိတ်သိ်မ်းခြင်း”ဟု ခေါ်ကြ သည်။ တပည့်တော်တို့သည် ယေရှုဘုရားနှင့် အချိန်အနည်းငယ်သာ အတူရှိနေခဲ့ကြ၏။ သို့ပါသော် လည်း ဝိညာဉ်များ ဖမ်းဆီးခြင်းဆိုင်ရာ အမှုတော်မြတ်ကို နားလည်ခဲ့ကြသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုသူတို့အား ယေရှုဘုရား ဦးစွာခေါ်ယူစဉ်က “ငါ့နောက်သို့လိုက်ကြလော့၊ လူကိုများသောတံခါသည် ဖြစ်စေမည်ဟု ပြောခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ (ရှင်မဿဲ ၄း၁၉)။ သို့သော် အခု သူတို့မြို့ထဲသို့ စားစရာဝယ်ရန် သွားနေခိုက်ဖြစ်သည်။ တပည့်တော်များ မြို့ထဲသို့သွားနေချိန်တွင် ယေရှုသည် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခဲ့၏။
“မရောက်မှီ တပည့်တော်တို့က အရှင်ဘုရား၊ အစာကိုသုံးဆောင်တော်မူပါဟု တောင်းပန်ကြလျှင် သင်တို့မသိသောစားစရာသည် ငါ၌ရှိသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် တပည့်တော်တို့က တစုံတစ်ယောက်သောသူသည် စားစရာကို ပို့ပြီလော့ဟု အချင်းချင်းမေးမြန်းကြလျှင် ယေရှုက ငါ့ကို စေလွှတ်တော်မူသော သူ၏ အလိုတော်ကို ဆောင်ခြင်း၊ သူ၏အမှုတော်ကို ပြီးစီးခြင်းအမှုသည် ငါ့စားစရာ ဖြစ်၏။ ယခုမှစ၍ လေးလလွန်လျှင် စပါးရိတ်ရာကာလ ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သင်တို့ဆိုတတ်သည်မဟုတ်လော။ ငါဆိုသည်ကား စပါးရိတ်ခြင်းအလို့ငှါ လယ်ပြင် တို့သည် ယခုပင် ဝင်းဝင်းရှိသည်ကို မျှော်၍ကြည့်ကြလော့။ (ယောဟန် ၄း၃၁-၃၅)
ရိတ်သိမ်းရန်ကာလသည် ယခုပင်ဖြစ်၏။ ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်က သူ့နှလုံးသားထဲက သံစဉ်ချိုဓမ္မ သီချင်းကို လှလှပပ ရေးသားသီကုံးခဲ့သည်မှာ ç
, နေ့တွင် ရိတ်သိမ်းပါ၊ အချိန်လွန်သော် ကောက်လှိုင်းများ ကြွေတော့မည် ယနေ့တွင် သင့်အား ဝိညာဉ်များစွာ ပေးသနား တောက်လောင်သောစိတ်ထားဖြင့် တဦးပြီးတဦး ခေါ်ဆောင်ပါ။ ယနေ့သည် အပြစ်သားများကို ခေါ်ဆောင်ရန် သွားကြပါကုန် (၁၈၉၅ -– ၁၉၈၀၊ ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ် သီကုံးသော “အချိန်အနည်းငယ် အတွင်း၌ ဆောင်ရွက်ပါ။”).
ယနေ့တွင် ရိတ်သိမ်းခြင်းမရှိပါက ရိတ်သိမ်းချိန်လွန်သွားပါလိမ့်မည်။ ကောက်သစ်စား ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းအပြီးမှပဲ ရိတ်သိမ်းပါက ပို၍ အခက်တွေ့စေပါလိမ့်မည်။ လောကီဆန်သော လော့စ်အိန်ဂျက် လိတ်မြို့ ခရစ်စမတ်(စ်) ရာသီပွဲ၌လည်း ရိတ်သိမ်း ဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။ ဇန်နဝါရီလနှင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလဆိုရင် အေးချမ်းပြီး မိုးရွာသွန်းချိန် ဖြစ်၍ ရိတ်သိမ်းရန်မဖြစ်န်ိုင်တော့ပါ။ ဆောင်းတွင်းသည် ကောလိပ်ကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်သည့်အချိန် ဖြစ်နေပါသည်။ ပို၍ ရိတ်သိမ်းရန် ခက်ခဲမည်သာဖြစ်သည်။ ဆောင်းရာသီနှင့် နွေဦးရာသီသည် စိတ်လေလွင့်သောရာသီများဖြစ်၏။ ထိုရာသီ၌ လူတိုင်းလိုလိုပင် ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သော သောကြာညမှ တနင်္ဂနွေညနေအထိ အဝေးသို့ အပန်းဖြေခရီးထွက်ကြသော အချိန်ကာလဖြစ်၏။ မာတင်လူသာကင်းအတွက် အားလပ်ရပ် (၃)ရက်လည်း ရှိသေး၏။ သမ္မတအား ဂုဏ်ပြုသော အားလပ် ရပ်(၃) ရက် လည်းရှိ၏။ မိခင်များနေ့လည်းရှိ၏။ အောက်မေ့ဖွယ် နေ့ရက်များလည်း ရှိ၏။ စာမေးပွဲ နောက်ဆုံးနေ့လည်း ရှိ၏။ အဖေများကို ဂုဏ်ပြုသောနေ့များလည်း ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် ဆိုးသွမ်းသော မြို့ကြီးပြကြီးတို့၌ ၎င်းနေ့ရက်များကို ကျင်းပသောအားဖြင့် ကျွန်ုfပ်တို့၏ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဝေငှရာတွင် အဟန့်အတားဖြစ်စေပါသည်။ ဂျူလိုင်လ (၄)ရက်နောက်ပိုင်းတွင် အသီးအနှံမှည့်လွန် ရိတ်သိမ်းခြင်း စတင်ပါသည်။ ယခုဩဂုတ်လ (၇)ရက်နေ့ကစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသီးအနှံ မှည့်လွန် ရိတ်သိမ်းခြင်း ကာလအလယ်၌ ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
“ယခုမှစ၍ လေးလွန်လျှင် စပါးရိတ်ရာကာလဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သင်တို့ဆိုတတ်သည် မဟုတ်လော့။ ငါဆိုသည်ကား စပါးရိတ်ခြင်းအလို့ငှါ လယ်ပြင်တို့သည် ယခုဝင်းဝင်း ရှိသည် မျှော်၍ ကြည့်ကြလော့။ (ယောဟန် ၄း၃၅)”
ယနေ့ရိတ်သိမ်းကြပါစို့ဟူသော ဓမ္မသီးချင်းကို သီဆိုကြပါစို့လား။
ယနေ့တွင် ရိတ်သိမ်းပါ အချိန်လွန်သော် ကောက်လှိုင်းများကြွေတော့မည် ယနေ့တွင်သင့်အား ဝိညာဉ်များစွာပေးသနား
တောက်လောင်သောစိတ်ထားဖြင့် တစ်ဦးပြီးတစ်ဦး ခေါ်ဆောင်လာပါ။
နေ့သည် အပြစ်သားများခေါ်ဆောင်ရန် သွားကြပါကုန်။
ယနေ့သည် အသီးမှည့်လွန် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ရိတ်သိမ်းရန် အချိန်ဖြစ်သည်။
၂။ ဒုတိယç ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ် မြောက်များစွာ ရိတ်သိမ်းရန်ရှိသည်။
ရှင်မဿဲ ၉း၃၆-၃၇ ကိုဖွင့်ပြီး အသံကျယ်ကျယ် ဖတ်ကြပါ။
“အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ ထိန်းသူမရှိပဲ ပစ်ထားသော သိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်က စပါးရိတ်စရာများစွာရှိ၏။ ရိတ်သော သူတို့သည် နည်းကြ၏။ (ရှင်မဿဲ ၉း၃၆-၃၇)”
ယေရှုဘုရားသခင်သည် ပျောက်ဆုံးနေသော ဝိညာဉ်မြောက်များစွာကို တွေ့မြင်၏။ ထိုသူတို့ကို သနားကြင်နာ၏။ ထိုသူတို့သည် ထိန်းသူမဲ့ သိုးပျောက်များဟူ၍ မြင်၏။ ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်မှာ “စပါးရိတ်စရာများစွာရှိ၏” ဟု မိန့်တော်မူ၏။
ယနေ့သည် ထိုကဲ့သို့ အောင်မြင်စေလိုသည်။ ရိတ်သိမ်းရန် မြောက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုသူ တို့ကို ကျေးဇူးတော်ကောက်သစ်စားပွဲ၌ ခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မစောင့်ဆိုင်းပါနဲ့။ ယခုပင် ထိုသူတို့ကို ခေါ်ဆောင် လာပါ။ နောက်အပတ် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် အရခေါ်ဆောင်လာပါ။ ထိုသူတို့အား ဧဝံဂေလိ သတင်းစကား ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားထောင်စေရန် ခေါ်ဆောင်လာပါ။ ကျေးဇူးတော်ကောက်သစ်စား ချီးမွမ်းခြင်း ပြီးမှ ရိတ်သိမ်းရန်သင်၏အမြင်ရူပါရုံကို ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါ။ အကယ်၍ ဒီအပတ်အတွင်း လူသစ် များအား တနင်္ဂနွေဝတ်ပြုအစီအစဉ်၌ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ကြားနာစေရန် ခေါ်ဆောင်လာန်ိုင်ပါက နောက်အပတ်တွင်လည်း သင် ထိုကဲ့သို့ ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဒေါက်တာရိုက်(စ်) ရေးသားသီဆိုသကဲ့သို့
“သင့်အပေါင်းအဖေါ်များ ယေရှုဘုရားထံ ခေါ်ဆောင်လာပါ။
ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မ မခွဲခြားဘဲ ခေါ်ဆောင်လာပါ။
ရိတ်သိမ်းသူသည် ကောက်လှိုင်းဆောင်လျှက် အိမ်ပြန်လာရမည်။
ချစ်သော အပေါင်းအသင်းများအား ကယ်တင်ဖို့ရန်
(၁၈၉၅ မှ ၁၉၈၀ ခုနှစ် ဒေါက်တာအာရိုက်(စ်)သီကုံးသော
“အို အပေါင်းအသင်းများ ကို ခေါ်လာပါ။)
သင်ဆုတောင်းခြင်းမရှိဘဲ သင်မိဘညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများအား ပြောင်းလဲစေဖို့ မလွယ်ကူပါ။ အချို့သောသူတို့သည် မည်မျှပင် ဆုတောင်းစေကာမူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မပြောင်းလဲပဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ် နိုင်သည်။ သို့သော် သင်သည် ကြိုးစား၍လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် “မြို့ပြင်လမ်းမ ခြံနားသို့သွားပြီး အနိုင်အထက်ခေါ်သွင်းရပါမည်။ ရှင်လုကာ ၁၄း၂၃” ယေရှုဘုရား၏တပည့်အိန္ဒြေသည် ယေရှုဘုရားကို တွေ့ခဲ့သောအခါတွင် “ထိုသူသည် မိမိအစ်ကို ရှိမုန်၊ ပေတရုကို ရှေ့ဦးစွာတွေ့လျှင် ငါတို့သည် မေရှိကို တွေ့ကြပြီဟု ပြောဆိုလျှက် သူကို့ ယေရှုထံသို့ ပို့ဆောင်လေ၏။ မေရှိအနက်က ခရစ်တော်ဟု ဆိုလိုသတည်း။ ယောဟန် ၁း၄၁-၄၂ “ အိန္ဒြေသည် မေရှိအကြောင်းကို စုံလင်စွာ သိသူမဟုတ်၊ သို့သော် အိန္ဒြေက ယေရှုသည် မေရှိယသခင်ဖြစ်သည်ကိုသိ၍ “သူ့ကို (ပေတရု) ယေရှုထံသို့ ပို့ဆောင်လေ၏။ “ အချို့သောသင်တို့တွင် မိမိတို့၏ အဆွေအမျိုးအပေါင်းအသင်းများအဖို့ မလျှော့သော စွဲလုံ့လဖြင့် ဆုတောင်းပေးပါသော်လည်း မပြောင်းလဲဘဲ နေကောင်းနေပါလိမ့်မည်။ မိမိတို့အဖို့ ဝမ်းနည်းကြေ ကွဲစွာ ဆုတောင်းပေးနေသည်ကို သိမြင်နိုင်သောအခါတွင်၎င်း၊ ထိုသူတို့အဖို့ ငိုကြွေးလျက် ဆုတောင်းပဌနာပြုပေးနေသည်ကို ထိုသူတို့သည် သိမြင်လာသောအခါ ဘုရားကျောင်းကို လာကြရောက် လာကြမှာဖြစ်ပြီး ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ကြားလျက် အသက်တာပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မည်။
“သို့ရာတွင် မယုံကြည်လျှင် အဘယ်သို့ ပဌနာပြုနိုင်မည်နည်း။ သတင်းမကြားလျှင် အဘယ်သို့ ယုံကြည်နိုင်သနည်း။ ဟောပြောသောသူမရှိလျှင် အဘယ်သို့ကြားနိုင် မည်နည်း။” (ရောမ ၁ဝး၁၄)
“ယခုသည် သတိပေးလျက် တိုးလျှိုးတောင်းပန်ကာ ငိုကြွေးမြည်တမ်းစွာဖြင့် ကားတိုင်ဆီသို့ ချဉ်းကပ်ပါ။ ပျောက်ဆုံးလူသားများအား ကာင်းကင်ဘုံအိမ်တော်သို့ ငိုကြွေးလျှက်ဆုတောင်းကာခေါ်ဆောင်လာပါ။ အိုး ချစ်သောမိတ်ဆွေများ ယေရှုဘုရားထံသို့ သင့်ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများအား ခေါ်ဆောင်လာပါ။ သင့်အပေါင်းအဖေါ်များကယ်တင်ဖို့အလို့ငှါ ဝိညာဉ်များအား ရိတ်သိမ်း ခေါ်ဆောင်လာပါ။ (ဒေါက်တာဂျွန်အာရိုက်(စ်)အိုင်ဘီအိုင်ဒီ)။
အချို့သောသူတို့က “ဒေါက်တာဟိုင်မာ ခင်ဗျား။ ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားပြီး အမှုတော်ဆောင်ရွက်ပါ သော်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ နားမထောင်ကြဘူး” ဟု ပြောကောင်းပြောပါလိမ့်မည်။ ထိုသူတို့၏ ခံစားမှုကို သဘောပေါက်နားလည်ပါသည်။ သို့သော်လည်း သင်၏အမှုတော်ဆောင် ခြင်းကို မရပ်တန့်ပါနှင့်။ ငါတို့သည် အားမလျှော့ပဲ “ အချိန်တန်သောကာလ၌ အသီးအနှံကို ရိတ်ရကြလိမ့်မည်။ (ဂလာတိ ၆း၉) သင်၏ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟများ နောက်အပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ခေါ်ဆောင်လာရန် အချိန်သည် ယခုပင်ဖြစ်ကြောင်း သင်စဉ်းစား သိမြင်ရပါမည်။အနိုင်အထက် ခေါ်သွင်းဖို့ရန်” သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်အားထက် သန်စွာဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပေးပါမည်။ ဆုတောင်း ကြပါစို့ ။ ဆုတောင်းအပြီး သင့်နေရာသို့ပြန်ရောက်ရှိပါက သီဆိုပြီးသွားသော ဓမ္မသီချင်းကို ပြန်လည်၍ ချီးမွမ်းသီဆိုကြပါစို့။
“အိုး ချစ်သောမိတ်ဆွေများ ယေရှုဘုရားထံသို့ သင့်ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်များအား ခေါ်ဆောင် လာပါ။ သင့်အပေါင်းအဖေါ်များ ကယ်တင်ခြင်းဖို့အလို့ငှါ ဝိညာဉ်များရိတ်သိမ်းဖို့ ခေါ်ဆောင် လာပါ။
၃။ တတိယç လုပ်ဆောင်သောသူတို့သည် နည်းကြ၏။
“အကြောင်းမူကား ထိုသူတို့သည် ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ ထိန်းသူမရှိဘဲ ပစ်ထားသောသိုးကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ၏။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်က စပါးရိတ်စရာ များစွာရှိ၏။ ရိတ်သောသူတို့သည် နည်းကြ၏။ ထို့ကြောင့် လုပ်ဆောင်သော သူတို့ကို စပါးရိတ်စေခြင်းငှာ စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း စပါးရှင်ကို ဆုတောင်းကြလော့ ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။(မဿဲ ၉း၃၆-၃၈)
“လူအစုအဝေးတို့ကို မြင်တော်မူလျှင်ဟုဆိုရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့၌ အတွေးသစ် အမြင်သစ်တစ်ခု ရှိလာသည်။ မကြာမှီတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပုံမှန်ဧဝံဂေလိတရားကြောင့် လူငယ်လူရွယ်များ အသင်းတော်၌ ရောက်ရှိလာကြပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ သူတို့ကို မည်ကဲ့သို့ ခံစားစေမည်နည်း။ သင်သည် သူတို့ကို နွေးနွေးထွေးဖြင့် ကြိုဆိုနေသည်ကို သူတို့ကိုမြင်တွေ့စေမှာလား။ သင်သည် စိတ်အားထက်သန်စွာ ထိုသူတို့ကို အပေါင်းအသင်းဖွဲ့လျှက် နွေးထွေးစေမှာလား။ သင်သည် သူတို့ကို ဂရုမစိုက်ပဲနေသည်ကို သူတို့အား ခံစားစေမှာလား။ သင်၏အစဉ်တစိုက် ဂရုစိုက်နေမှုကို သူတစ်ပါးအား မျှဝေခံစားပါ။
ဤအရာများ နောက်အပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ သင်မှတ်သား လုပ်ဆောင်မှာလား။ ထိုအရာများ မေ့လျော့ ပါက လူသစ်များအား အဝင်လမ်းပိတ်သလို ဖြစ်နေပေမည်။ ဤအရာများ လွန်ခဲ့သော စနေနေ့ညက “ခရစ်တော်ဘုရား၏ ဇွဲလုံ့လဝိရိယဖြင့် အမှုတော်ဆောင်ရွက်ခြင်း” ဒေသနာကို ကျွန်ုfပ် ဟောကြားခဲ့သည်။ “ကျွန်ုပ်တို့သည် သီဆိုချီးမွမ်းရာတွင် ရွှင်လန်းစွာ သီဆိုရမည်။ “ဟူသော အရေးကြီး သော အချက်တစ်ခုကို ဟောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းအချက်က စနေနေ့ည ဝတ်ပြုခြင်းအစည်းအဝေး၌ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်း အရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့၏။ သို့သော် (၁၂)နာရီကျော်လွန်၍ တနင်္ဂနွေမနက်ပိုင်းတွင် “လပေါင်းမြောက်များစွာ သီဆိုချီးမွမ်းခြင်းထဲက အဆိုးရွားဆုံး သီဆိုချီးမွမ်းမှု ဖြစ်ခဲ့ရ၏” အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်၀သော ပုဂ္ဂိုလ်များအားနည်းလျက် ပျင်းရိသောကြောင့်ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အသစ်ပြုပြင် ပြောင်းလဲသောသူဖြစ်စေကာမူ ပျင်းရိခြင်းနှင့် ပုံမှန်ထက် နှေးကွေးစွာလုပ်ဆောင်ချင်စိတ်က ကျွန်ုပ်တို့အား သွေးဆောင်သောကြောင့်ဖြစ်၏။ ဤအရာများက အသီးအနှံမှည့်လွန်ရိတ်သိမ်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် စနေနေ့ညက ဟောကြားသော တရားဒေသနာတော်ကို တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ပိုင်းတွင် မေ့လျော့ကြရခြင်းဖြစ်သည်။
ဤဒေသနာ၌လည်း ၎င်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်စေချင်ပါသည်။ ယေရှုဘုရား မိန့်တော်မူသည်မှာ “စပါးရိတ်စရာ များစွာရှိ၏။ ရိတ်သောသူတို့သည် နည်းကြ၏။” ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့အသင်း တော်များ၌ ထိုသို့အမှန် ဖြစ်နေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်များ၌ ထိုကဲ့သို့လုပ်ဆောင်သူအများ လိုအပ်နေသည်ကို မြင်တွေ့စေလိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ လုပ်ဆောင်လိုသောသူအချို့တို့ ရှိနေသောကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်း ပါသည်။ သို့တိုင်အောင် စိတ်နှလုံးပြင်းထန်စွာဖြင့် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ ဖမ်းဆီးဖို့ရန် ဇွဲလုံ့လ မရှိကြချေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းထောက်များနှင့် အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်များက လူသစ်များ ခေါ်ဆောင်လာပါ သော်လည်း “လုပ်ဆောင်သောသူ နည်းပါးသောကြောင့်” ထိုသူတို့အထဲက အချို့တို့သည် ဘုရားကျောင်း သို့ ပြန်မလာလိုကြတော့ပေ။ အိုး လူငယ်များ နိုးကြားကြပါစို့။ ရိတ်သိမ်းဖို့ ခွန်အား ယူကြပါစို့။ အချို့သူတို့က ဝိညာဉ်အိပ်ပျော်ရာမှ မနိုးကြားသေးပါ။ လွန်ခဲ့သောအပတ်က ကြိုးစား၍ လူသစ်များ ခေါ်ဆောင်လာသကဲ့သို့ နောက်တစ်ဖန် လူသစ်များရှာဖွေ၍ လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ အသစ်အသစ်တို့ကို ခေါ်ဆောင်လာနိုင်ရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၌ အမှုတော်ဆောင် တစ်ချို့ ရှိနေသောကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလိုက်ပါ။ သို့သော် ယေရှုဘုရားကç
“ထိုအခါ ကိုယ်တော်က စပါးရိတ်စရာ များစွာရှိ၏။ ရိတ်သောသူတို့သည် နည်းကြ၏။ ထို့ကြောင့် လုပ်ဆောင်သောသူတို့ကို စပါးရိတ်စေခြင်းငှာ စေလွှတ်တော်မူမည်အကြောင်း စပါးရှင်ကို ဆုတောင်းကြလော့” (ရှင်မဿဲ ၉း၃၇-၃၈)
အမှုတော်ဆောင်များဖြစ်ကြသော ဆိုရီယာ၊ ရှီလာ၊ အန်သော်နီ၊ ဂျက်(ခ) နှင့် တင်နာတို့ကဲ့သို့ ရိတ်သိမ်းရန်လုပ်ဆောင်သူများဖြစ်လာဖို့ ဆုတောင်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ သူတို့သည် ကြောက်ရွံ့ နေမည့်အစား စိတ်အားထက်သန်စွာ အမှုတော်၌ ဆောင်ရွက်ခဲ့သူများဖြစ်ကြ၏။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များကို အသင်းတော်သို့ပြန်ခေါ်လာဖို့ နိုးနိုးကြားကြား လုပ်ဆောင်ခဲ့သူများ ဖြစ်ကြသည်။
ရိတ်သိမ်ခြင်းသည် အပတ်တိုင်း အရမ်းကြာရှည်သည်မဟုတ်ပါ။ အတူတကွ အစားစားသုံးပြီး နာရီဝတ်ခန့်မျှသာဖြစ်သည်။ နာရီဝတ်အတွင်း လူသစ်များအဖို့ အခိုင်အမာဆုံဖြတ်ချက် ပေးနိုင်သည် မဟုတ်ပါလား။ ငိုက်မျဉ်းအိပ်ပျော်သူတို့အဖို့ အသင်းတော်၌ မိတ်သဟာယအချိန်တွင် စိတ်ဝင်စားမှု မရှိနိုင်ကြပေ။ ထိုသူတို့၌ ချက်ခြင်းဆောင်ရွက်လိုစိတ်မရှိ။ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များအဖို့ စိတ်အား ထက်သန်ခြင်း မရှိပေ။ ထိုသူတို့သည် လွန်ခဲ့သောတနင်္ဂနွေနေ့ကကဲ့သို့ လာမည့်အပတ် တနင်္ဂနွေ နေ့၌လည်း ပျင်းရိနေဦးမည်။ ထိုသူတို့အား ဘုရားရှင်၏ တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်း မရှိပါက နိုးထလာမည် မဟုတ်ပေ။
“အချိန်အနည်းငယ်သာရှိ၏”ဟူသော ဓမ္မသီချင်း သီဆိုသည်။
“ရိတ်သိမ်းချိန်မကြာမှီကုန်ဆုံးမည် ကောက်လှိုင်းများယူ၍အိမ်ပြန်ခရီးဆက်ကြမည်။ စပါးရှင်ယေရှုထံလုပ်အားခခံရကြမည်။ အပြုံးနဲ့ဆီးကြိုလျက် သစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်း ယနေ့ မရိတ်သိမ်းပါက အချိန်ကုန်လွန်ပါတော့မည်။ ယနေ့ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ သင့်အားပေးတော်မူ၏။ ဖျက်ဆီးခြင်းမီးငရဲမှကယ်တင်ခေါ်ယူပါ။ ယနေ့သွား၍ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ရှာဖွေပါ။ (ဒေါက်တာ ရိုက်. အိုင်ဘီအိုင်ဒီ)
ပရောဖက်ယေရမိက “အသီးအနှံ ရိတ်သိမ်းရာကာလ လွန်ပြီ။ နွေကာလ ကုန်ပြီ။ ငါတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်ကြ” (ယေရမိ ၈း၂၀) ယနေ့သည် ဩဂုတ်လ (၇)ရက်နေ့ ရောက်ပါပြီ။ နောက်တနင်္ဂနွေ(သုံးပတ်)ပြီးလျှင် နွေရာသီ ကုန်ဆုံပါတော့မည်။ နွေးဦးကာလပြီး၍ နွေရာသီလည်း ကုန်ဆုံးပါတော့မည်။ သင်သည် အသစ်ပြုပြင် မပြောင်းလဲသေးပါလား။ ခရစ်တော်ဘုရားသည် သင်၏ အပြစ်ကြွေးအဖို့ အသေခံ ပေးဆပ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူပြီး အဖခမည်းတော် ၏ လက်က်ျmတော်ဘက်၌ ထိုင်နေ၍ သင့်အဖို့ ဆုတောင်းပေးနေပါသည်။ သင်သည် ယေရှုခရစ်သခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါက သင့်အပြစ်အဖို့ အသွေးတော်တန်ခိုးဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါမည်။ “အသစ် ပြုပြင် ပြောင်းလဲသောသူမဟုတ်ပါက” အချိန်နာရီတိုင်း ဤတရားဒေသနာကို ဖတ်၍နားထောင်စေလို ပါသည်။ သင်အသက်တာပြောင်းလဲဖို့ အခွင့်အလမ်းများစွာ ရှိပါလျှက်နှင့် အဘယ်ကြောင့် စိတ်မဝင်စား လိုလားခြင်းမရှိ ဖြစ်နေရသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် ယေရှုသခင်ထံ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ဖို့ ခါးသီးစွာ ငြင်းဆန်နေရသနည်း၊ နောင်တရလျှက် ယေရှုသခင်ထံ အမြန်တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။
ယနေ့ မရိတ်သိမ်းပါက အချိန်ကုန်လွန်ပါတော့မည်။ ယနေ့ ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်များ သင့်အားပေးတော်မူ၏။ ဖျက်ဆီးခြင်းမီးငရဲမှကယ်တင်ခေါ်ယူပါ။ ယနေ့သွား၍ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ရှာဖွေပါ။
( ဒေါက်တာဂျွန်အာရိုက် ၁၈၉၅ -၁၉၈၀) ခုနှစ်၌ သီးကုံသော “အချိန်အနည်းငယ်သာကျန်ခဲ့၏” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို ကျူးဧပေးပါသည်။